Nokia 1 Plus: Njirimara, Nkọwapụta Leaked na Na-ekpughere | Gam akporosis
Nokia 1 Plus: Njirimara, Nkọwapụta Leaked, ma Egosiputa
HMD Global nwere ekwentị gam akporo abụọ ugbu a. Nke mbu bu Nokia 1, nke ewepụtara na February nke afọ gara aga ma enwere Nokia 2.1. Ọhụụ ọhụụ ekpughere na Nokia 1 ga-enwe onye nọchiri ya dị ka Nokia 1 Plus Ma enwere ike na a ga-ekwupụta ya na MWC 2019.
Nokia 1 Plus na-ehi ehi gụnyere ya nkọwa na a na-enye igosi ihu igwe. Isi iyi ya bụ TigerMobiles ma na-azọrọ na ọ sitere n'aka ọkachamara a tụkwasịrị obi.
Dị ka zuru ezu, Nokia 1 Plus ga - enwe 1 GB nke Ram. Egosighi ikike nchekwa, mana anyị anaghị atụ anya ihe karịrị 8 GB na oghere kaadi microSD maka mgbasa. Ihe nhazi ahụ ka si MediaTek, mana ugbu a ọ bụ MT6739WW - 1.5 GHz quad-core CPU na PowerVR GE8100 GPU.
Leaked Nokia 1 Plus ụdịdị
E gosipụtaghị nha ihuenyo, ma nkọwa zuru ezu bụ pikselụ 480 x 960, nke sụgharịrị ka ọ bụrụ akụkụ 18: 9. Onye bu ya ụzọ, Nokia 1, nwere ihuenyo 4,5 x 480 x 854p (16: 9). E nweghịkwa ihe ọmụma banyere igwefoto ekwentị na nkọwapụta batrị.
Nokia 1 Plus ga-agba ọsọ A gam akporo. HMD Global egosiworị nke ahụ el Nokia 1 a ga-emelitekwa ya na gam akporo, ma nke ahụ bụ mmalite nke nkeji nke abụọ nke 2019.
TigerMobiles kwuru na Nokia 1 Plus ga-ejigide atụmatụ njikọ nke Nokia 1, gụnyere nkwado maka Dual-Sim, Wi-Fi, Bluetooth, na ọdụ ụgbọ mmiri MicroUSB.
Nokia 1 gbakwunyere nye
Banyere imewe ahụ, ihe ngosi ahụ na-egosi nke ahụ Nokia 1 Plus nwere oke bezels mara mma, ọ bụ ezie na ihuenyo ya nwere akụkụ 18: 9. Igwe elu ahụ nwere igwefoto n'ihu na ntị, yana akara ngosi Nokia na akuku aka nri. Agba agba agba.
O di nwute, enweghi foto azu. The Nokia 1 malitere na mbughari batrị na ikpe Xpress-On. Oge ikpeazụ na-enye gị ohere ịgbanwe mkpuchi azụ nke ekwentị maka nke dị iche iche iji nye ngwaọrụ ahụ anya ọhụrụ. Anyị amaghị ma HMD Global ga-edebe atụmatụ ahụ ma ọ bụ wepụ ya maka nkwado na-enweghị iwepu.
N'ikpeazụ, HMD Global ekwenyela na ọ ga-aga MWC 2019 wee kpọsaa ekwentị ọhụrụ. Nokia 1 Plus nwere ike iso na ekwentị ndị a ga-ekpughere na mmemme ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nokia 1 Plus: Njirimara, Nkọwapụta Leaked, ma Egosiputa
Ngwaọrụ redio kacha mma maka ekwentị gam akporo gị
Energizer iji kpughee ekwentị 18.000 mAh na MWC 2019